Raysulwasaare Xasan Cali Khayre oo ka hadlaya qado sharafta loogu sameeyay xarunta dalxiiska Hido-Raac. [Sawirka: Puntland Mirror]
Ciidamada Puntland ee qaybta gobolka Nugaal oo wali haysta baabuur ciidan oo loo waday degmada Ceelbuur ee gobolada dhexe
Garoowe-(Puntland Mirror) Ciidamada amaanka Puntland gaar ahaan kuwa qaybta Nugaal oo uu hoggaamiyo sarkaalka la dhaho Jimcaale Jaamac Takar ayaa asbuucii hore qabsaday shan baabuur oo loo waday gobolada dhexe ee Soomaaliya. Baabuurta ayaa ka [...]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ugu yaraan 10 qof ayaa lagu dilay 20 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii gaari walxaha qarxa laga soo buuxshay lagu qarxiyay albaabka hore ee xarunta madaxtooyada Soomaaliya ee magaalada Muqdisho maanta [...]
Muxuu safarka Khayre uu muhiimad u leeyahay Puntland?
Raysulwasaaraha Dowladda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa maanta oo Axad ah safar ku yimid caasimada Puntland ee Garoowe. Waa safarkiisii ugu horeeyay Puntland tan iyo markii la doortay. Puntland iyo shacabkeeda ayaa si maamuus [...]